के “गलबन्दी” गित चोरिएकै हो त ? यसो भन्छन् गायक प्रकाश सपुत – Nepal Trending
के “गलबन्दी” गित चोरिएकै हो त ? यसो भन्छन् गायक प्रकाश सपुत
On २७ जेष्ठ २०७६, सोमबार १०:१०
काठमाडौं : नेपालीहरुको मौलिक पहिचान र संस्कृती रहेको लोक तथा दोहोरी गीतमा पनि यतिबेला आधुनिकताको नाममा पश्चिमी शैलीको गन्ध भेटिन्छ । यस्तै शैली छाडा शब्दका गीतहरु सुन्दा सुन्दा वाक्क भएका दर्शक तथा श्रोताहरुलाई आफनै संस्कृती र मौलिकता झल्किने गीत आयो गलबन्दी ।
चर्चित गायक , लय संयोजक तथा रचनाकार समेत रहेका प्रकाश सपुत ल्याएको उक्त गीत यसरी भाईरल बनिरहेको छ की यो गीत युट्युवमा एक हप्ता पनि करिब १६ दिनमै करोड क्ल्बमा पुग्ने तयारीमा रहेको छ ।
गीतको संगित , आवाज , शब्द र भिडियोमा नेपालको रोधी बस्ने संस्कृतीलाई जस्ताको त्यस्तै उतारिएको गलबन्दी मन नपराउने बालबालिका बृद्धबृद्धादेखि कोही छैनन् । चर्चा नै चर्चा भईरहेको बेला यस गीतलाई आरोप पनि लागेको छ । बिषेश गरी प्रकास सपुतलाई यतिबेला यो गीत चोरी गरिएको आरोप लागेको हो ।
उनले गलबन्दी गीत चर्चित गायक शम्भु राईको आउ नाचौँ साथी हो कम्भर कसेर गीतसंग हुबहु मिलेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । झट्ट सुन्दा गीत हुबहु त नभनौँ तर कता कता प्रभावित चाही भएको हो की भन्ने भान गराउछ । हुन त यो संयोग पनि हुन सक्छ । चोरीको आरोप लागिरहदा नत प्रकास सपुतले यसबारेमा बोलेका छन् नत शम्भु राईले कुनै दाबी नै गरेका छन् ।
यता पछिल्लो समय विभिन्न कार्यक्रमहरुमा नै व्यस्त रहेका प्रकास सपुतले भने एक अन्तरवार्तामा चोरीको आरोपबारे बोलेका छन् । उनले गीत निकालेर छोडिसकेको अवस्थामा अब छुट्टाउने जिम्मा दर्शक तथा श्रोताहरुको भएको बताएका छन् ।
उनले शम्भु राईसंग आफनो प्रत्यक्ष कुराकानी नै नभएको बताउदै भने “मैले पनि केही भनेको छैन शम्भु राई सरले पनि भाई यस्तो भएछ भन्नु भएको छैन । भेटघाट भएपछि भोलीका दिन केही कुरा आउँला” । उनले दर्शकबाट पाईरहेको प्रतिक्रियालाई सकरात्मकरुपमा लिएको बताउदै भने “गलबन्दीबाट हामीले गीत , भिडियो सबैमा सयमा सय नम्बर पायौँ भन्ने जस्तो लागेको थियो । तर केही नम्बरहरु यस्ता घटनाले काटिदिएको छ ।
यसले चाही हामीलाई अर्काे काम गर्न प्रेरणा दिन्छ” । उनले यस्तो भनिराख्दा कतै उनको गीत शम्भु प्रधानको गीतसंग प्रभावित नै भएको त होईन भन्ने प्रश्न उत्पन्न गराईदिएको छ । किनकी कुनै पनि आरोप खण्डन वा त्यसको जवाफ दिनै पर्छ अब हेरौँ प्रकासले यसको जवाफ कहिले दिन्छन् ।